Zvishandiso zvakakosha kuita chidzidzo chepamusika | ECommerce nhau
Zvishandiso zvakakosha kuita chidzidzo chepamusika
Claudi casals | | Analytics, CRM uye Big Data, eCommerce
Makore apfuura, makambani ainyanya kutarisa bhizinesi rekushambadzira. Dzidzo dzepamusika dzemhando yepamusoro dzaidhura zvakanyanya. Icho chikonzero chakatenderedza mutengo ndechekuti iwe waimbofanirwa kuhaya vashandi, kana kuzviita iwe panyama. Zvimwe kubva kumafemu ekubvunzurudza ane dhata pane chikamu icho isu chataizobata, uye nedata rakajairika, kuongorora zvakaitwa nemakwikwi kana kuongororwa kwevashandi vanozobhadharwa.
Iye zvino, internet inotipa maturusi ekuitisa zvidzidzo zvemusika, zvinobudirira uye nehupfumi. Nekudaro, izvi zvakabvumidza makwikwi kuti avewo nekuwana idzi nzira nyowani dzekuongorora. Asi kunyangwe paine zvimwe zvidzidzo, kuti unzwisise zvirinani mutengi, izvo zviri kure nekuve chinokanganisa chinogona kuve chekuwedzera, nekutarisa zvakanyanya pane izvo zvinotsvakwa nevatengi. Uye nekuda kwechikonzero ichi, nhasi tichaona akateedzana ezvishandiso zvakakosha kuita chidzidzo chepamusika.
1 Ko maturusi ekutsvagisa musika anoitei?
2 Zvishandiso zvekuita pamusika kudzidza pamhepo
2.2 Google Maitiro
3 Mhedziso yekutsvaga kwemusika
Ko maturusi ekutsvagisa musika anoitei?
Ivo vanoongorora inogona musika, Pakati pechipo chiripo uye kudiwa kwezvigadzirwa kana masevhisi anoongororwa. Chinangwa ndechekugona kuwana izvo misika niches umo mune zvishoma kushomeka uye kudiwa kukuru. Iyi dhata inotibatsira kuona ingangodaro budiriro, kusiyana nemisika uko kune kwakawanda kugovera, asi kushoma kudikanwa kwechimwe chinhu.
Mushure meaya data, pfungwa yakajeka yemapoinzi maviri anogona kuwanikwa. Huwandu hwevatengi vanozofanira kutenga chigadzirwa kana masevhisi mukati menguva uye mutengo watinogona kuvapa.
Zvishandiso zvekuita pamusika kudzidza pamhepo
Kubva pano, tichaenda kunoona runyorwa rwezvakanaka zvishandiso zvinotibvumidza isu kuti tiwane kuongororwa kwakanaka.
Kana zvasvika pakuita kudzidza, SEMrush inogara iri pfungwa yangu yekutanga. Kana iwe usina kuziva chikuva ichi, ndinokukoka iwe kuti uwane iyo webhusaiti, kana kune akasiyana maonero evashandisi vanoishandisa. Ivo vane anopfuura makumi mana maturusi mukusimudzira kwese, uye bvumira zvakakwana zvakakwana SEO uye SEM kuongororwa. Iwe unogona zvakare kuongorora mawebhusaiti emakwikwi, izvo zvirimo, mazwi akakosha, nezvimwe.
Izvo zvakanaka kuti ukwanise kuongorora yako webhusaiti, chinzvimbo icho chinowoneka mune tsvaga, tsvaga mazwi akakosha anopa zvakanyanya kugona, shanduko uye trajectory yewebhusaiti yako, uye zvinogona musika niches.
SEMrush inobhadharwa, asi ivo vanopa sarudzo yekunyoresa uye kuyedza kutsvaga kweiyo yakatarwa nhamba yenguva. Kubva ipapo, inobhadharwa kana iwe uchida kuenderera. Neiyi nzira, iwe uchazoziva kunakidza zvese zvishandiso zvavanopa zviri.
Google Maitiro inotipa a yemahara uye yemahara chishandiso kuyera kuyerera kweimwe rakakosha kiyi kupfuuridza nguva. Inogona zvakare kushandiswa kuenzanisa akawanda mazwi uye kutsvaga kwekutsvaga maitiro. Maitiro avo anoonekwa pamatemo maviri, imwe yenguva uye imwe yacho indekisi inotangira pa0 kusvika 100 yekufarirwa kana kufarira.
Mune zviitiko apo isu tinotsvaga mazano, ayo ari mashoma kwazvo achifambiswa, meseji inoratidzika ichitaura kuti hapana data rakaringana rekukwanisa kuita zvabuda. NeGoogle Trends, tinogona kuwana kuti ndeapi mazwi anonyanya kutsvaga nekufamba kwenguva, nepi muzana, uye mumatunhu api kana nyika, kuti uwane maitiro.
Google Keyword Planner iko kushanduka kweakare Google Keyword Turu. chishandiso ichi inotipa isu neakanyanya kutsvaga mazwi ebhizinesi redu, uye kugona kusarudza zvine hunyanzvi izvo izvo vashandisi vanowanzo tsvaga. Tichakurudzira mazwi akakosha kuitira kuti iwo mazwi akakosha atinoronga kushandisa ave nemabatiro akanaka, semuenzaniso mumashambadziro ekushambadzira.
Chimwe chezvishandiso zvemahara zvatinopihwa neGoogle zvinotibatsira mukudzidza kwedu kwemusika. Google Analytics inotipa akawanda manhamba ekuti uone zviri kuitwa nevashandisi pane yedu webhusaiti. Ziva kuti ndeapi mapeji avanoshanyira kazhinji, iyo nguva yavanogara pavari, kana vari kubhowa, nzvimbo kunobva vashanyi, shanduko dzakaitwa, iko kuita kwekushambadzira mishandirapamwe ... Chishandiso chakakosha, icho chisingafanire kunge chisipo.
Ichi chishandiso chinotibvumidza kuona mwero wekutaura kana kukosha kweshoko ratiri kutsvaga, zvese zviri online uye mumagariro, mifananidzo kana mablog. Zvemagariro zvakare inotibvumira kuziva manzwiro (uye nezvikamu) izvo zvinomuka, sezvo zvichitarisawo kana zvataurwa zvacho zvisina kunaka, zvisina kwazvakarerekera kana zvakanaka. Nenzira iyi isu tinokwanisa kuona chiyero uye chiyero chekufarira icho chiratidzo chedu chinomutsa, tichienzanisa neicho chevakwikwidzi vedu.
Alexa Iyo inotibvumidza isu kufungidzira traffic yewebhusaiti uye nenzvimbo yayo, pamwe nevhoriyamu yetraffic yatingave nayo. Uye zvakare, zvinotibvumidza isu kuziva kuti ndeapi mazwi echisikigo saiti iri kuiswa. Nezve zvinangwa zvekutsvaga mumusika, zvichatibatsira kuona kuti ndeapi mazwi akakosha anoshandiswa zvakanyanya.
Dzimwe nguva zvinokwanisika kuwana mutsauko pakati pehunhu hwedata hwatinoratidzwa ku Alexa uye pakati pezvimwe zvishandiso, nepakati pavo. Asi chinhu chakakosha kugona kuyera misiyano iri pakati pematanho akaratidzirwa kwatiri, kuti uzive chakanyanya kukosha kwatiri. Ini ndinotaura izvi kuti ndisazongo gumira pachishandiso chimwe chete, seti yadzo, kunyangwe tichava nedata rakawanda, zvakare ruzivo rwakawanda kuti rinyatsoita muzvidzidzo zvemusika.
Ichi chishandiso chinokutendera iwe kuti uongorore yako webhusaiti, iyo yemakwikwi, uienzanise navo, uye uteedzere zita rako kuburikidza nehukama hwemagariro. Iyo inonzwisisika kwazvo uye iri nyore kushandisa, uye munguva pfupi, iwe unenge uine mukana weakawanda wehunyanzvi ongororo yewebhusaiti yako. Kunyoresa kuri nyore kwazvo, ingo enda kune webhusaiti ye Quicksprout uye pinda domain yewebhusaiti yako. Kubva pano, mumatanho mashoma mushure mekusimbiswa kuburikidza ne-e-mail, yakabatana, uye yakagadzirira kushandisa.
Mhedziso yekutsvaga kwemusika
Kutanga kuitisa chidzidzo chepamusika chinokurumidza uye chiri nyore nhasi. Izvo zvakanyanya sarudzo zvatiinazvo nekushandisa, zvinowedzera kujekesa, kuvimbika uye nemazvo zvichave.
Iye zvino unogona kuona kuti ndeapi maturusi ese ayo iwe aunofanira kuisa kuti utange. Uye zvechokwadi, usazvivharira iwe mune imwe kana maviri, kuti ugone kuve neakawanda wepasirese uye akazara maonero nezve rako bhizinesi. Enda kumberi uye "tamba" navo vese, uye iwe unokwanisa kutanga kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika, uye mazano anomuka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zvishandiso zvakakosha kuita chidzidzo chepamusika
chinyorwa chakanaka chakandibatsira zvakanyanya ndinovimba chikamu 2 ndinacho
Pindura kune alejandrolemus
Nyowani manejimendi mhinduro kuSage. Sage Contaplus inochinja kune Sage 50cloud
Cluster: Kubatana nzira dzekukudza kambani yako